Araka izany, i Kyriakos Mistsotakis no mitantana indray ny firenena grika ary manome toky fa haka fepetra hentitra mba hampiroboroboana ny firenena, izay vao nivoaka krizy ara-bola. Ny antoko “Nouvelle democratie” no nahazo ny maro an`isa manana seza 158. Manaraka azy ny antoko Syriza, izay nahazo seza 86. Na dia niondrika aza ny praiminisitra teo aloha dia nirary soa an`ity mpisolo toerana azy ity ny tenany. Tsiahivina fa ny taona 2015 i Alexis Tsipras no nitantana ny raharaham-panjakana. “Ny faharesena dia ao anatin`ny ady. Faly ihany aho satria ny fomba fitantanako no nitondra indray ny firenena tsy ao anaty krizy intsony”, hoy izy nandritra ny valandresaka niarahana tamin`ny mpanao gazety.